Guushu Waa Midnimada Iyo Kalsoonida!
Monday 19th July 2021 11:00:22 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Henry Ford wuxuu ahaa aasaasaha shirkadda gaadiidka samaysa "Ford Motor Company".
Mar la weydiidyay sababaha guushiisa horseeday waxa uu sheegay inay guusha u keeneen shaqaalaha wanaagsan ee uu haysto. Waxa uu sheegay in shaqaalaha qof kasta halka uu ku wanaagsan yahay ee aqoon iyo khibrad u leeyahay inuu shaqo geliyo.
Weligay ma bedelin shaqaale ku fiican goobta uu ka sheqeeyo waan dhiirgeliya oo abaal mariya. Waana tan horseeday inaan guulaysto. Guushaydu maaha aniga waa midnimada, isku kalsoonida iyo aqoonta shaqaalahayga. Waxa ay u wada shaeqeeyan sida hal qof. Koox kasta oo wanaagsani waxay keenta horumar, bulshadana wanaageedu wuxu keenayaa horumarkooda.
Henery Ford weedha muhiimka ee leeyahay waa : " Haddii ay lacagtu tahay rajadaada, weligaa ma helaysid madax-bannaanida. Damaanadda dhabta ah ee qofku ku heli doono adduunkan ayaa ah aqoonta, khibrada iyo kartida”
Urur Ka Shaqeeya Midnimada Itoobiya Oo Sheegay In Masar Ku Dedaalayso Sidii Ay Itoobiya Uga Xanibi Lahayd Isticmaalka De
Midnimada Soomaaliyeed Iyo Xaalka Dawladnimada Soomaaliya Waa Kala Laba, Labaduna Waxa Ay U Yaalaan Dadkooda.
[Xasaasi:-] Axmed Yuusuf Yaasiin Oo Ka Hadlay Qadiyadda Somaliland & Doodaha Dawladda Soomaaliya Ee Midnimada.
[Xasaasi:-] Siyaasi Cali Guray Oo Ka Hadlay Mawqifka Madaxweyne Ka Aaminsan Yahay Midnimada Soomaaliya.
"Taiwan Midnimada Soomaaliya Ayey Wiiqeysaa" Shiinaha Tashuush Ku Furay Xidhiidhka Somaliland Iyo Taiwan.
Maxaa Aasaas U Ahaa Heshiiskii Midnimada Waqooyiga Iyo Koonfurta? [ Gudaha Ka Akhriso ]
[Top secret:-] Geeddi-Socodka Shirka, Ajandayaasha Qarsoon Iyo Arrinkii Ugu Xasaasisanaa Ee Midnimada Ama Kala Tagga Oo
Dawlada Soomaaliya Oo Hanjabaad Culus U Dirtay Shirkada Dp World "Shirkadda DP-world Wayna Xumaysay, Waxayna Khata